Mgbe niile, ana m ahahie ụzọ ole ma ole. M na-azọpụta post dị ka a gbara. Agụrụ m akwụkwọ ahụ. M akaebe-agụ akwụkwọ ahụ. M na-edozi mmejọ ma na-ebipụtaghachi ya ugboro ugboro. N'ikpeazụ, m na-ebipụta post… ma gosipụta ya ọzọ. N’agbanyeghi na m kpachapụrụ anya, aga m ahapụ otu n ’imehie ndị ahụ‘ na-eme ka m daa ogbi ’.
Ihe omume Gather kpaliri m ide banyere onye nkuzi Bekee nke asatọ, Oriakụ Rae-Kelly. Ọ bụrụ na ịnweghị nkeji ma ọ bụ abụọ iji gụọ post ahụ, m ga-ejupụta gị. N'oge ahụ na ndụ m, ejighị m onwe m n'aka ma na-achọ onye ga-enye m ihe kpatara m ga-eji nwee nnabata onwe m. .
Oriakụ Rae-Kelly maara ka esi akpali ma wulite ugwu nke ụmụ akwụkwọ ya. Nke ahụ dị obere nye ndị nkuzi na ndị ndu n’oge a. Amaara m na Brian edeghị post ahụ iji 'mee ka m daa ogbi' mana ọ ga - ewetara m nsogbu. Olileanya m nye gị ndị na-eche maka ịde blọgụ ma ọ bụ ịde blọgụ bụ na isiokwu ndị dị ka nke a anaghị ada mbà.
IHE: Brian's blog bụ otu nke kasị mma na net. Ọ bụ ezigbo akụ ma nyeere m aka ịmeziwanye ederede m na nnomi ederede ederede. Ọ bụ blọọgụ obi ụtọ ma dịkwa mma na enweghị ike iji ya mee ihe ga - eme ka ndị edemede kwụsị ya.
Enweghị m ike ikwu maka ndị na - ede blọgụ niile, mana m ga - agbaghara gị maka mmejọ gị ma nwee olile anya na ị ga - agbaghara m maka nke m. Anaghị m agụ blọgụ gị n'ihi na m na-achọ ịchọta njehie gị - m na-agụ ya n'ihi na m na-amụta ihe n'aka gị ma ọ bụ na-enwe obi ụtọ na ederede gị. N'otu oge ahụ, enwere m olileanya na ị ga-ewepụta oge iji dejupụta kọntaktị m ma ọ bụrụ na “M dị ka ogbi”. Agaghị m ewe iwe… otu n'ime ndị na-agụ akwụkwọ m ga-akọwara m ugboro atọ na email mgbe m dere ndụmọdụ kama ndụmọdụ (argh!).
Enweghị m ike ịgwa gị oge ole m degharịa post a ka ọ ghara ịda n'ụzọ ahụ! Blog gi bu ezigbo ihe omuma na ihe nkwalite. Amaara m na ịgaghị ekwu ya n'ụzọ ahụ ma ọlị - enwere m mmetụta ọsọ ọsọ ebe ọ bụ na 'a na-ama m aka'. 🙂